Itoobiya oo xaqiijisay buuxinta biyo xireenka muranka badan dhaliyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Itoobiya oo xaqiijisay buuxinta biyo xireenka muranka badan dhaliyay
Xukuumadda Itoobiya ayaa shaacisay in ay bilowday buuxinta biyo xireenka weyn ee dalkaasi ka dhisayo webiga Niil, Sida laga soo xigtay Telefishanka dawladda.
Wasiirka biyaha,waraabka iyo tamarta, Sileshi Bekele ayaa sheegay in muuqaalladii dayaxgacmeedku qaaday ee muujinayey xaddiga biyaha haradaas ee kordhayaa ay run yihiin isla markaana la buuxinayo haradaas.
Waxay arrintani imaaneysaa xilli uu guuldarro ku dhammaaday wadahadallo u dhexeeyay Masar, Itoobiya iyo Suudaan kaas oo la doonayay in lagu xalliyo muranka ka dhashay biyo xireenka Itoobiya ka dhiseyso webiga Nile.
Guddiga farsamada ee wadahadallada ayaa warbixin u gudbinayaa Midowga Afrika oo garwadeen ka ah dhexdhexaadinta dalalkan.
Itoobiya waxay u aragtaa in biyo xireenka uu ka qeyb ka yahay dhaqaalaheeda halka Masar ay cabsi ka qabto in saameyn uu ku yeesho heerka biyaha webiga Nile oo ku tiirsan yihiin shacabkeeda.
Previous articleGolaha Shacabka oo ka dooday Sharciyo muhim ah
Next articleRW Kheyra oo kulamo gaar gaar ah ka wada Dhuusamareeb